हाल, धेरै मोबाइल अपरेटरहरु भुक्तानी सेवाहरूमा सदस्यहरू एक विशाल संख्या "लगाएको" छन् भनेर थाह छ। निस्सन्देह, त्यहाँ केही अवस्थामा तिनीहरूलाई लागि आवश्यकता। तर, यो पनि बस चाहिन्छ जब हुन्छ। र, उदाहरणका लागि त्यहाँ छ, को प्रश्न इन्टरनेट असक्षम कसरी टन मा।
र यो साँचो हो!
मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग लगभग सबै सदस्यहरू
तथ्याङ्क देखाउन रूपमा, माथि-उल्लेख मोबाइल अपरेटर ग्राहकहरु को एक विशाल भाग नियमित आफूलाई यस्तो प्रश्न: "कसरी टन मा इन्टरनेट असक्षम"?
तर, यो संग धेरै कठिनाई तपाईं वर्ल्ड वाइड वेब मा वायरलेस पहुँच असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ जसमा तरिका को एक सम्पूर्ण शस्त्रागार छ किनभने उत्पन्न हुँदैन।
यो पनि टन सिम कार्ड को आज धेरै मालिक सिर्फ वैश्विक नेटवर्क प्रयोग गर्न असीमित शुल्क अस्तित्व सजग छौं भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। क्षणमा, मोबाइल संचालक को सदस्यहरू को संख्या निःशुल्क यातायात सजिलै हुन सक्छ कि छनौट छन् व्याख्या: देखि एक पटक आफ्नो मोबाइल बिल तरिका बन्द पैसा केही मात्रामा, एकपटक तपाईंले टन मा इन्टरनेट असक्षम गर्ने बारे सोच्न सुरु लेख्नुहोस्। हो, मोबाइल इन्टरनेट - एक सजिला कुरा हो, तर महंगा। तपाईं एक रोमिङ क्षेत्रमा झनै भने।
त्यसैले, हामी टन मा इन्टरनेट असक्षम कसरी मुद्दा को व्यावहारिक पक्ष बारी।
वर्ल्ड वाइड वेब पहुँच गर्न अक्षम तरिकाहरू
टन को आधिकारिक इन्टरनेट स्रोत खोल्न, यसको मुख्य पृष्ठ "सहायता र समर्थन" खण्ड मा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई क्लिक गर्नुहोस्: सबै भन्दा साधारण तरिका को एक निम्नानुसार छ। यो खुल्नेछ एक संवाद बक्स र मेनु "आत्म-सेवा", तपाईं टैब "इन्टरनेट सहायक" गर्न आवश्यक हुनेछ जो खोज्न आवश्यक हुनेछ।
यस मामला मा, तपाईं प्रणाली र आफ्नो सेल फोन नम्बर प्रविष्ट गर्न पासवर्ड प्रदान गर्नु पर्छ। निस्सन्देह, धेरै मान्छे के पासवर्ड छ बारे थाहा छ। संख्या र अक्षरहरू को यस विशिष्ट संयोजन। पासवर्ड टन को विशेषज्ञहरु द्वारा पहिचान गर्न, यो एसएमएस सन्देश मार्फत पठाउन आवश्यक छ। यो त तपाईं एक ठाउँ राख्न र त्यसपछि पासवर्ड नै प्रविष्ट गर्नुपर्छ, को 25 नम्बर सुरु हुनु पर्छ। त्यस अवस्थामा, तपाईं मेनु प्रविष्ट गर्न तीन "इन्टरनेट सहायक" गलत पासवर्ड निर्दिष्ट गर्दा, तपाईं फेरि माथि कार्य गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो "इन्टरनेट सहायक" विशेषताहरु
तथापि, सबैलाई यो "इन्टरनेट सहायक" थाह छ। यसैबीच, यो एक धेरै सुविधाजनक सेवा भनेर सजिलै मोबाइल उपकरण, साथै मोबाइल अपरेटर द्वारा प्रदान गरिएको छ कि सेवाहरूको पूर्ण सीमा व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं जडान वा विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई मदत संग, यसको आफ्नै नगद ब्यालेन्स निगरानी यो र सामान Replenish गर्न, अन्य महसुल गर्न संक्रमण बनाउन। यो सेवा "इन्टरनेट सहायक" पनि सक्रियता र बन्द गर्न विषयको उल्लेख गर्नुपर्छ।
तर फिर्ता कसरी असक्षम को प्रश्न गर्न असीमित इन्टरनेट टन। तपाईंले "इन्टरनेट सहायक" प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईं मात्र सिस्टम को निर्देशनहरू पालना हुनेछ।
कसरी अझै मोबाइल इन्टरनेट टन असक्षम? यो धेरै सरल छ। सेलुलर अपरेटर को सदस्य विभाग को नम्बर डायल गर्नुहोस्। "0890": यो एकदम याद गर्न सजिलो छ। कि पछि, तपाईं बस कम्पनीको विशेषज्ञ गर्न जडान लागि प्रतीक्षा र समस्या व्याख्या गर्न हुनेछ। उहाँले आफ्नो मोबाइल फोनमा वर्ल्ड वाइड वेब पहुँच गर्न अक्षम गर्न के बारेमा सल्लाह हुनेछ।
पहिले नै जोड रूपमा, अब मोबाइल नेटवर्क संचालक आफ्नो सदस्यहरू सेवाहरू सबै प्रकार को एक विशाल चयन प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको खातामा नगद चार्ज गरिने छैन, भुक्तानी सेवा दिन अप।
निःशुल्क अनुप्रयोग नेटवर्क पहुँच गर्न अक्षम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
दर्ज गर्न भने वैश्विक नेटवर्क तपाईं केवल एक मोबाइल उपकरण वा ट्याब्लेट यन्त्र उपयोग गर्दै छन्, त्यसपछि सक्रिय वा यो सेवा निःशुल्क आवेदन तपाईं यसलाई के गर्न सक्षम हुनेछ जो संग स्थापना गर्न सिफारिस गर्न सक्छन् निष्क्रिय। यस मामला मा, डाउनलोड गर्ने लिङ्क टन को आधिकारिक वेब पोर्टल मा पाउन सकिन्छ।
तपाईं देख चिन्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो सेल फोन गर्न सीधा माथि लिंक को स्थापना आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं के गर्नुपर्छ? यसलाई सरल छ। बस डायल * 111 * 1111 # र तपाईं तुरुन्त तपाईंलाई रुचि लिङ्क एसएमएस सन्देश पठाइनेछ। अर्को, तपाईं मात्र प्रदान निर्देशनहरू पालना हुनेछ। टन बाट यो अनुप्रयोग तपाईं मात्र सेवा संग काम को अवधि खर्च हुनेछ ट्राफिक भुक्तानी, मुक्त छ।
USSD- टोली प्रयोग
टन जडित कि सकिँदैन र USSD-आदेश को माध्यम द्वारा जडान विच्छेद विभिन्न सेवाहरू सम्पूर्ण शस्त्रागार प्रयोग गर्न प्रदान गर्दछ। विभिन्न रूसी क्षेत्रहरु मा एकै समयमा तिनीहरूले प्रत्येक अन्य फरक हुन सक्छ, त्यसैले तिनीहरू प्राविधिक सहयोग कल गर्न आवश्यकता स्पष्ट गर्न पनि अल्छी छैनन्।
विशेष, "इन्टरनेट +" सेवा निष्क्रिय गर्न, निम्न संयोजन आफ्नो मोबाइल फोनमा डायल: * 111 * 22 #। * 111 * 24 #: तपाईं सेवा "इन्टरनेट सहायक" प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं संख्या र वर्ण को एक सेट गर्न आवश्यक छ।
यो सेवाको निष्क्रियकरण तुरुन्तै हुँदैन भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ, र समय देखि 24 घण्टा भित्र अनुरोध पठाइएको थियो। आवेदन तपाईं को सन्तुष्टि एसएमएस सन्देश मार्फत जानकारी गरिने छ।
निस्सन्देह, यो तपाईं इन्टरनेटमा पहुँच इन्कार गर्न सक्छन् जो सबै तरिका हो। त्यहाँ पनि विश्वसनीय तेज छ, तर छैन। के? तपाईंले व्यक्तिगत तवरमा कुनै पनि टन कार्यालय भ्रमण र मदत लागि कर्मचारी सोध्न सक्छ। कुनै एक यो तपाईं गर्न सिम कार्ड पर्छ कि कुनै पनि शङ्का थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न, आफ्नो पहिचान कागजात ल्याउन नबिर्सनुहोला।
हाल, वर्ल्ड वाइड वेब पहुँच प्रयोगकर्ताहरूको माथिको अपरेटर को विशाल रकम महसुल "बिट" र "Superboy" उठाउँछ। नेटवर्कमा पहुँच गर्न अक्षम के उपाय तिनीहरूलाई लिने? सदस्यहरू पहिलो दर संख्या संयोजन एउटा एसएमएस सन्देश पठाउन गर्नुपर्छ "9950" "111" नम्बर, र एक पटक "Superba" छनौट गर्नेहरूलाई "6280" एउटै नम्बर पठाउन सक्छन् गर्न।
सुविधाहरू3जी-मोडेम मार्फत वैश्विक नेटवर्क पहुँच गर्न अक्षम
टन मोबाइल अपरेटर द्वारा प्रदान सेवाहरू बन्द चलाउन, मोबाइल फोन को मालिक, तर पनि मोबाइल उपकरणहरूमा भन्दा उच्च एक गति मा3जी-मोडेम विश्वव्यापी वेब मा निस्कनुहोस् प्रयोग गर्नेहरूलाई मात्र सम्भव छैन।
नियम, तिनीहरूले एक ल्यापटप वा जडान भएका छन् पीसी। निस्सन्देह, माथि उपकरणहरू इन्टरनेटको प्रयोगको लागि उपयुक्त हो। तथापि,3जी-मोडेम मालिक वैश्विक नेटवर्क पहुँच गर्न अक्षम गर्न इच्छा व्यक्त भने, यो सिर्फ सहायता डेस्क गर्न एक कल र लक आफ्नो सिम कार्ड को लागि अनुरोध गर्न पर्याप्त हुनेछ। तपाईं व्यक्तिगत कार्ड लागि फोन प्रयोग गर्नेछ, र आवश्यकता इन्टरनेटमा फेरि उठ्छ भने, तपाईं 3G-मोडेम मा सिम कार्ड अनलक गर्न सक्छन्।
असक्षम इन्टरनेट टन मुफ्त प्रदर्शन
माथिको मोबाइल अपरेटर को सदस्य सञ्चालनहरू सक्रिय भनेर र टन इन्टरनेटमा पहुँच नि: शुल्क बनाउन असक्षम र दिन को कुनै पनि समय तपाईं यसलाई के गर्न बिर्सनु हुँदैन।
अनिवार्य माथिको सिफारिसहरू तपाईं इन्टरनेट ट्राफिक प्रदान गर्न टन सेवाहरू नत्याग्ने निर्णय घटनाको उपयोगी हुनेछ।
कान मा डण्डीफोर: समस्या थप जटिल भन्दा यो देखिन्छ हुन सक्छ
रंग पाँच मिनेट मिश्रण
मास्को मा 1896 को Khodynka विनाश
आगो लड पानी: सुविधाहरू, उपकरण, र प्रणाली प्रतिक्रियाहरू